स्वागत छ. तपाईंलाई पेनीसँग परिचित गरौँ™
स्वास्थ्य बिमा किन्नेबारे थाह छैन? समस्या छैन. तपाईँलाई सही कवरेज प्राप्त गर्न सँगै काम गरौं।
पेनी एक मात्र स्थान हो जसले तपाईंलाई आफ्नो मासिक भुक्तानी र/वा आउट-अफ-जेब खर्च कम गर्न अमेरिकन रेस्क्यु प्लानबाट थप वित्तीय सहयोगसँग जोड्नेछ।
किनमेल गर्न तयार हुनुहुन्छ?
पेनीले बिमा को अर्थ दिन्छ
खरिद स्वास्थ्य बीमा जटिल हुनु हुँदैन। पेनीले तथ्यहरू बताउँछिन् र तपाईंलाई आफ्ना विकल्पहरू बुझ्न मदत गर्छिन्।
हाम्रो FAQ पृष्ठमा सजिलै बुझ्न सक्ने जवाफ प्राप्त गर्नुहोस्।
पेनीले कसरी काम गर्छ, हेर्नुहोस्। भर इन एस्पानोल ।
आधारभूत कुराहरूबाट सुरु गरौं
स्वास्थ्य बिमा भनेको के हो?
आवरण कसले पाउन सक्छ?
नागरिक, अमेरिकी नागरिक वा योग्य आप्रवास स्थिति भएका पीए बासिन्दाहरूले पेनी मार्फत स्वास्थ्य कवरेजमा आवेदन र भर्ना गर्न सक्छन्। काम वा मेडिकेडजस्तो अरू कार्यक्रममा भाग लिनुभएन? तपाईँले पेनी मार्फत तपाईंको लागि सही आवरण फेला पार्न सक्नुहुन्छ ।
कवरेज विकल्पहरू हेर्नुहोस्
आर्थिक सहयोग कसले पाउँछ ?
हालै पारित अमेरिकन रिस्क्यु प्लानमा पेन्सिलभेनियाका मानिसहरूले किनमेल गर्न थप बचत गर्नुका साथै पेनीमार्फत भर्ना भइसकेका व्यक्तिहरूको लागि थप बचत गरिएको छ।
तपाईँको बचत गणना गर्नुहोस्!
आवरण किन प्राप्त हुन्छ?
दुर्घटना र रोगबिमार हरू हुन्छन्। स्वास्थ्य बिमाले तपाईंलाई अनिश्चित समयमा मनोशान्ति दिन्छ। जस्तै: COVID-19 महामारी। साथै, तपाईं र तपाईंको परिवारलाई स्वस्थ राख्न कुनै-कुनै रोकथाम सेवाहरू निश्शुल्क उपलब्ध छन्।
हेर्नुहोस् भर्ना गर्न कति सजिलो छ
थप का लागि खोजिरहेछु?
थप मनोशान्ति प्रदान गर्ने पेनीले तपाईंलाई सही बिमा योजनासित कसरी जोड्न सक्छ भनी थाह पाउन अझ बढी स्रोतसाधनहरू जाँच्नुहोस्।
चरण मार्गदर्शकद्वारा चरण हेर्नुहोस्
पसल & compare
तपाईँका लागि सही योजना फेला पार्नुहोस्
महत्वपूर्ण कर सूचना
के आशा गर्ने सिक्नुहोस्
पछिल्लो चरणका लागि तयार हुनुहुन्छ ?
यदि तपाईं सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, तपाईं सजिलै किनमेल गर्न सक्नुहुन्छ र योजनाहरू तुलना गर्न सक्नुहुन्छ र आर्थिक सहयोगको लागि योग्य हुनुहुन्छ कि सक्नुहुन्न हेर्न सक्नुहुन्छ।
Shop & compare योजना
पेनीले कसरी काम गर्छ, हेर्नुहोस्।